FARRIINTA TORONTO IYO CAASIMADAYNTA HARGEYSA
“Nimaan dhul marini dhaayo ma leh”
Sheekooyinka dal-mareenku curiyaan, xiisahooda wax u dhigmaa ma jiraan. U-safarka dal cusub, la-kulanka dad cusub, barashada dhulkooda, dhaqankooda, Hab-nololeedkooda, dareenkooda iyo dadnimadooda, anshaxa iyo adduun-araggooda, waxay kugu dhoweeyaan garashada adduunka aynu ku nool nahay sirtiisa aan salkeeda la gaari karayn. Degaankaagii, dalkaagii iyo qarankaagii aad beri beryaha ka mid ah u haysatay inay adduunka ugu sitaan dhinac walba ayaad ka kortaa oo aqoon iyo waaya-arag hor leh korodhsataa.
Waa markii iigu horraysey ee aan dalka KANADA (Canada) booqasho ku tago. Walaal aanu dhowr iyo soddon sannadood ismooganayn ka-war-doonistiis, saaxiibbo aanu CADAN ku wada kornay, wax ku wada barannay, xusuu sal-ma-guurta ah wadaagno la-kulankood, iyo Soomaalida faraha badan ee maanta dalkaas ku nool xaaladda ay ku sugan yihiin.. intaas oo ay weliba ii weheliso bal inaan dalkaas baaxadda weyn ka soo daymo-sugto, ayaa safakaas iigu wacnaa.
Dayuuradda oo soo degaysa, TORONTO markaad cirka ka soo daalacatid, si baaxad leh ayay isu kala bixisaa. Daaro joog dheer iyo kuwo gaagaaban, doogga dhulka waran, dhirta caleemaha ballaaran ee mur-baxay, waddooyinka kala qaybinaya, ayaa bilicda iyo quruxda magaaladaas lagu tilmaamo siinaya.
Muddada ay qaadatay, hawsha gashay iyo xeeldheerida loo kaashaday, maalka la geliyay, maamulka ka dambeeya, intaas oo isu dugsaday, ayaa TORONTO muuqaalkaas dadkeedu ku faano oo ku fara yaraysto gaarsiiyay, ciddii soo booqatona ku majiirato oo jeclaysato in casharro laga kororsado.
Casharka u horreeya wuxuu noqonayaa: Sidii loo tixgelin lahaa facaadda soo koraysa iyo kuwa dhalanaya ee berrito xilka maamulku ku soo baxsan doono.
Magaalada Toronto ee Soomaalidu ugu badan tahay, dhirta aad ugu tagtaa waa kaymo is-haysta. Biyuhu waa durdur aan marna cirku godolka dayn. Dhulka doog baa goglan. Meesha baadka iyo biyuhu ay sidaas ku yihiin, ayaa misna carruurta la baraa sidii ay dhirta iyo biyaha u ilaashan lahaayeen. Dawladda, ama cid gaar ah sida shirkadaha, haddii ay rabto inay dhul bannaysato ay guryo ka dhisato, ama mashruuc kale oo faa’iido leh lagu qabanayo, guddi qaran iyo hey’ado bulsheed oo xeer iyo sharci adag raacaya jeer laga soo ansaxiyo mooyee, ma dhici karto in la bixiyo dhulkaas. Dalka laga hadlayaana, garo oo, hadda waa Kanada. Ifka ma jiro dal ballacaas leh oo kaymuhu jiq yihiin, biyuhu durdur aan kala go’ayn yihiin, cirkiisa roobku ka guurin, dadka ku dul noolina aanay ka badnayn dhawr-iyo-soddon malyuun oo misna sidaas u ilaashanaya baadka iyo biyaha ay hodonka ugu yihiin.
Farriinta Toronto haddaan soo koobo: Dhul aan barwaaqo ahayn, dhul aan qurux lahayn ifka ma jiro. Waxaase jira dad faqiir ah oo aqoonta, caqliga iyo yahuunta ka faqiir ah. Dad foolxun oo aan manaafacsan karin hodonnimada dhulkooda; faqriga iyo foolxumiduna korkooda ka muuqdaan.
QURUX iyo HODONNIMO waa kuwa aad tacab ku kasbatid, ku baahi tira ee kaa muuqda, aad ku tanaadid oo dunida kaga tirsanaatid. Marna ma aha kuwa geyigaaga iyo cimiladiisa ka muuqda ee aad caalwaa ka arradan tahay.
ISHA MAANKA ayaan ka soo laliyay badweynta Atlantiga oo la soo tiigsaday Qaaradda Afrika Geeskeeda Bari. Hargeysa iyo goobtay ku taal ayay ishu ku mudantay. Garan maayo magaalo Soomaliyeed oo ku taal goob, meel ahaan, muuqaal ahaan, cimilo ahaan u dhiganta dhulka HAREYSI ka dul dhisan tahay.
“Hargeysii awelba miyaanay caasimad ahayn? Yaa ku haysta?”
Dadka qaarkood, gaar ahaan inta qarannimada Somaliland ay ‘muqaddas’ u tahay, cadho iyo yaab isku jira ayay ku kicinaysaa: “ Markeedii horeba Somaliland xaqdarro, ayaa aqoonsiga loogu diiddanaa, ee maantana ma Hargeysaa loo soo dhigtay, oo durba loo diiddan yahay inay caasimadda Somaliland tahay. Annagaa belo aragnay!!”
Mar hadday sidaas tahay, si dareenka khaladka ah looga soo doogo, Hargeysana loo xaal mariyo, igu sin aan kuu saafee. Ha iga degdegin.
Halaag ummadda Somaaliyeed ku habsada, loogama horrayn dagaalkii 1977-8 lagu qaaday Itoobiya. Jabkii xoogga dalka Soomaaliyeed cuskaday, ayaa ahaa burburkii qarannimada ummadda Soomaaliyeed ee xiligaas dhisnayd. Intii ka dambaysay, waxaa lagu jiray maamulxumo, carcaraaf, iyo collaad xannuun badan oo sii gaamuraysay. Sannadkii1991ka billowgiisii, ayaa taliskii dhagartaa u sal iyo sabab ahaa dalkii laga cayrshay. Dulmigii iyo falxumidii uu laasimay, ayaa gudaha kaga burqatay. Shicbiga u sii adkaysan kari waayay kadeedkaas ayaa iska tuuray, iyadoo mucaaradka hubaysani uu ridmo kulul ka geystay. Qaran iyo dawladdii halkaas ayay ku galbadeen.
Markaan Hargeysadii aan hadal hayay u soo laabto, waxaa goobtaas loogu yimid HARGEYSA oo galgalin laga yeelay. Beri hore uu goraygii ka hadaafay! Magaalada CADAN, ayaan xilligaas ku ekaa. Hindi saaxiibkay ah, la yiraahdo Mushtaaq oo beri-samaadkii, lixdanaadkii yiqiin Hargeysa, kana shaqayn jiray shirkadda dayuuradaha ee Aden Airways ee duulimaadka toddobaad walba ku iman jirtey Hargeysa, Berbera, Burco iyo Ceerigaaboba, ayaa markan bilowgii sagaashanaadka soo raacay dayuurad ay Yamantu leedahay – ALYEMDA- si loo sahmiyo in safarro cirka ah loo tegi karo Somaliland xilligaas. Mushtaaq ayaa garoonkii Hargeysa ka soo degey.
“ Ha lay geeyo Oriental Hotel,’ ayuu yiri. Meeshii ayaa la keenay, isagoo u qaba in baadiye kale loo sii marayo magaaladii Hargeysa ee uu beri yiqiin. “ Waynu joognaa Oriental Hotel, ee xaggee rabtaa?, ayaa lagu celiyay. Agagaarkiisa ayuu fiirsaday.. kolkuu yiqiinsaday in gabaahiirta uu dhex taagan yahay ay Hargeysadii uu seben yiqiin tahay, ayaa miyir ugu dambaysay. Mantag iyo muraaradillaac isku darsamay ayuu noqday. Isagoo miyir la’ ayuu dayuuraddii dib u soo raacay. Maalmo yar ka dib, ayaanu wada kulannay isagoo aan weli si fiican u kala miiraabin.
‘ Ii warran, maxaad safarkii Hargeysa kala kulantay?’ ayaan weyddiiyay. “ Ha ila soo qaadin, Siciidow, ha ila soo qaadin,” ayuu iigu celceliyay. Ka dibna wixii uu soo arkay ayaan tartiib tartiib uga guray.
GOOBTAAS ayay ahayd Hargeysada maanta loo jeedaa.
Nabadda la soo hooyay; Dhismaha la is-tacjabaayo; Waddooyinka magaalada isku xira; Ganacsiga iyo isgaarsiinta casriga; Jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada ee dalka ku baahsan; Golayaasha maamulka iyo axsaabta siyaasiga ah ee doorashooyin ku soo baxa; Shicbiga xilli walba heeganka u ah in wixii guulahaa wiiqaya meel uga soo wada jeestaan.. iyo qaar kaloo badan waa inta Soomaali kastaa, meeshuu doonoba ha ku noolaadee, uu ku ammaano Somaliland iyo kuwii halkaas ku soo simay, hisheeyuhuna ka marag kacaan.
Hargeysa.. burburkii ummadda Soomaaliyeed cuskaday, waa goobta keliya ee la isku raacsan yahay inay si fiican uga soo doogtay dibindaabyadii, dakharadii iyo dabargoyntii lala maagay.
Waa maxay haddaa Caasimadaynta u dhiman ee aan sheegayaa?
Inta la soo maray, guulaha la gaaray, haddii aanay lahayn yool lasii hilaadinayo, ma waarayaan. Dib-u-dhac ku yimaadda iska ma baajin karaan. Sidaas darteed, dhallinta soo koraysa iyo facaadda dhalanaysa haddaan loo sii qorshayn tubta ay raaci doonaan … ee inta nooli iyadu uun isku gaafwareegto, lagama badbaadi karo wixii shalayto soo maray ee xuxuusta iyo xanuunka badnaa. Indho mustaqbalka diirradda saaraya, ayaa loo baahan yahay.
Daaro waaweyn, dhismo qurxoon, dukaammo cammiran, xaafado is kala feeraarinaya inta u dhexaysa Naasa-hablood, Abaarso, iyo Masallaha, Hargeysi way kasii ballaaran kartaa; hase yeeshee intaas oo idil iyo maskaxda ‘maalin-u-noolka ‘ ah ee ka dambaysa kuma magaaloobayso. Haddii aanay magaaloobinna gunta ayay ka dumi doontaa, iyadoo aan dibedda laga soo weerarin. Cadhada gaamurta, quusta iyo niyadjabka dhallinyarada, cidla’ joogga isu arka, ku dhacaya ayaa ku filan.
Xaafad kasta jeer ay yeelato : dugsi quraan, goobtiisa waxbarasho, bannaankiisa, iyo ammaankiisa (qol afar derbi dhexdood, ubad laguma korin karo aayo laga rabo). Dugsiyada sare, sidoo kale ugu yaraan waa inay leeyihiin deyrkooda garoonka weyni ku dhex yaal. Mid waliba tababarka isboortiga kubbadaha ku qabsado. Goobaha nasashada ee dhirtu ku beeran tahay oo xaafad waliba dhul u bannaysato. Garoommada tartanka ciyaaraha oo magaaladu dhawr goobood ku yeelato. Maktabadaha shicbiga iyo kuwo gaar ah oo degmooyinka magaalada ka hirgala. Xarumaha dhaqanka oo naadiyada rayidka ahi ay samaystaan, kuwa fanka iyo cayaarahaba. Guri kastoo la dhisanayo, geeduhu weheliyaan qorshaha dhismadiisa.
Way jirtaa in wixii la soo qaadoba farta lagu fiiqo dawladda dhexe iyo xilkeeda. Taassi waxay u ekaanaysaa, dhaliicayn iyo eedayn aan hawsha meesha taal inna wax ka tarayn. Xilkaasi, sidii dib-u-dhiska dalka wuxuu u baahan yahay in la isugu tago:
– Marka hore arrinka la yaqiinsado
– Marka xigta go’aan laga qaato
– Marka kalena fulintiisa qorshe loo dejiyo
– Marka u dambaysana qorshahaas lagu kaco fulintiisa
Si mashruucaasi u dhabboobo, in xilqaybsi iyo xisaabtan adag hawshaas lagu maareeyo. Tallaabada u horraysaa, intay doonto ha qaadato, waa dareenkaas oo dadka iyo dawladdaba maankooda cuskada.
Guulihii wacnaa ee talada midaysan, wada-jirka, hawlkarnimada hagarbaxa leh lagu soo hooyay, sidii dhidibbada loogu sii aasi lahaa, kuwa la higsanayona looga niib-keeni lahaa, ha loo tog hayo. Haddii ay beri hore Hargeysi muran la’aan ahaan jirtay hoygii fanka Soomaaliyeed, in maanta lagu simo inay noqoto xarruntii fanka, suugaanta, cilmiga, iyo fikirka Soomaaliyeed .. cid ka hor joogsan kartaa ma ay jirto, kolkay iyadoo isku duuban u guntato.
W.Q, Siciid Jaamac Xuseen